Fifidianana Irakiana-Fanadihadian’ny bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2018 8:46 GMT
Nandany ny alina henjakenjana sy mangina miandry ny mangiran-dratsy ny Irakiana. Na izany aza, ankoatra ny fampitandremana (voaporofo fa diso) momba ny fanapoizinana faobe ny rano, ny famonoana kandidà maromaro, sy ny hoso-pifidianana mikasika ireo biletam-pifidianana hosoka, mbola manantena ny Irakiana amin'ity andro ity, andro izay hitan'ny maro ho toy ny voalohany amin'ireo dingana maro izay hitarika azy ireo any amin'ny fahafahany manokana.
Miovaova be ireo faminavinana momba ny fifidianana, tahaka ireo kandidà ihany. Manantena governemanta vaovao tsy ara-pivavahana ny Irakiana sasany, ny hafa kosa mino fa tsy hisy na inona na inona hiova amin'ny fifidianana vaovao, ary ny hafa misafidy tsy hiraharaha tanteraka. Na izany na tsy izany, eo ireo bilaogera Irakiana manome vaovao farany ho antsika.
Noho ny fiarahamiasa amin'ny Friedrich-Ebert-Foundation, nozaraina tao Iraka tamin'ny 11 sy 12 Desambra 2005 ny “Toro-lalana ho an'ireo antoko Irakiana”, ho fanampin'ny gazety “Al-Sabah al-Jadid”. Nisy ireo fampielezan-kevitra faobe tamin'ny afisy avy amin'ireo kandidà samihafa. Raha tsy nanampy anao hanomana ny vatonao (izay ho safidianao) ny afisy, dia manana mpifidy hanampy anao hijery izay antoko hofidiana mifototra amin'ny fanontaniana miisa 25 kosa i Niqash.org. Ireto misy santionany kely amin'ny isa mifandraika amin'ity fifidianana ity (miampy tombatombana kely fotsiny):
Olana lehibe ny fiarovana mialoha sy aorian'ny fifidianana, ary maro ireo fepetra norasina. Nakatona ny sisintany ho fanomanana ny andro fifidianana ary napetraka teo amin'ny olom-pirenena ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina mba hilamina ny arabe. Nampitomboina ny isan'ny polisy eny amin'ny biraom-pifidianana.
Malaza be ao amin'ny faritra atsimo ao Iraka ary mandrafitra ny ankamaroan'ny shiita. Muqtada al Sadr sy Ayatollah Sheik al Sistani no olo-malaza ao amin'ity antoko ity ary mampiseho sehatra ara-pivavahana henjana.
Mandrafitra ny vahoaka Sonita ao Iraka, tsara ny manamarika fa avy amin'ireo foko rehetra ao amin'ny firenena ny mpanohana ity antoko ity
ity no antoko tarihin'ny filohan'i Iraka ankehitriny Ayad Allawi, ary mametraka safidy laika ho an'ny governemanta. Maro ny Irakiana mifidy ny 731 satria te-hanalavitra ireo antoko mifantoka be amin'ny fivavahana izy ireo, ary manohana ny toe-java-misy ankehitriny ny 731.
Mampiseho ny tenany ho konglomerà manjaka ao amin'ny lisitra Kiordistana rehetra, ny fanohanana ity antoko ity dia saiky mifantoka tanteraka ao amin'ny faritra avaratr'i Iraka.
Ny zavatra iray manjaka amin'ny fahitana ireo hevitra samihafa amin'ny fifidianana dia ny hafatra fanantenana amin'ny hoavy, na inona na inona fironana ara-politika na hevitra momba politika ivelany amerikana. Ankehitriny, hampiseho amin'izao tontolo izao ny rantsan-tanany miloko volomparasy am-pireharehana ny Irakiana!